पहिले आगलागी पिडित, अहिले नगरपालिका पीडित - BirtaJyoti
पहिले आगलागी पिडित, अहिले नगरपालिका पीडित
adminMay 14, 2019 1:51 am 0
काँकरभिट्टा । भानुटोलका आगलागी पीडित सुकुम्बासीले टहरा नहटाए डोजर लगाउने धम्कीको विरोध गर्दै गरीब उठिवास गराउँने सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
पाँचदिन भित्र टहरा हटाउन सूचना जारी गर्दा नगरपालिकाका उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितको टोलीले डोजर लगाएर टहरा भत्काइदिने धम्की दिए ।
गत पुस १२ गते राती ८ बजे भएको आगलागी बाट घोसखानमा साना छाप्रा हालेर जीवकोपार्जन गर्दै आएका २२ घर परिवारको विचल्ली भएको थियो । आगलागीबाट सर्वस्व गुमाएका उनीहरुको बसोवासको व्यवस्थापन गर्नको सट्टा उठिबास लगाउने प्रपन्चमा नगरपालिका जुटेको उनीहरुले बताएका छन् ।
‘हामीले पटक पटक राहत र वसोवासको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्यौं,” आगलागी पीडित गोपाल मिश्रले चार महिनादेखि आफुहरु विचल्ली भएको बताउँदै भने–“ हाम्रो कुरा कसैले सुनेनन्,” आगलागीपछि नगरपालिकाले कुनै न कुनै व्यवस्थापन गर्ला भनेर पर्खिएको पनि उनीहरुले बताएका छन् ।
“यत्तिका समयसम्म पख्यौं, बर्खा लाग्न लागे पछि फेरी टहरा हालेर लालाबालालाई राख्न खोज्दा डोजर लगाएर हटाउँने धम्की आयो” उनले भने ।
२२ घर परिवार मध्ये १४ घर परिवारले सोही स्थानमा फेरी छात्रा हालेका छन्े भने अन्य ८ घर परिवारले आर्थिक अवस्था नभएका कारण छात्रा हाल्न नसकेको पीडित मानप्रसाद गुरुङले बताए । गुरुङ अजै त्रिपालको सहारामा गुजारा गरिरहेका छन् ।
ख्याम्याङले दिए धम्की
पाँच दिनको म्याद सकिएको दिन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख महेन्द्रकुमार ख्याम्याङले टहरा हटाउन धम्की दिएको पीडितले बताएका छन् । प्रहरी सहित उपप्रमुखसँगै घोसखान पुगेका ख्याम्याङले गरीबले आफ्नो हैसियतमा बस्नु पर्ने अन्यथा यस्तालाई तहलगाउँन आफुले जानेको भन्दै धम्क्याएको पीडितले बताएका छन् ।
आगलागी पीडित मदन कडेलले भने “स्थानीय सरकारले त हाम्रो दुख पो बुझ्ने हो तर, हामीलाई त तह लगाइदिने धम्की दिदाँ पनि जनप्रतिनिधि कोही बोल्दैनन् ।” आगलागी भएको ठाउँमा ठुलो कमर्सियल महल बनाउँने योजना सहित नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति समेत निर्माण गरिसकको स्थानीयले बताएका छन् । तर उपभोक्ता समिति बनेको उनीहरुलाई भने थाहा छैन ।
नगरपालिका जसरी पनि उनीहरुलाई हटाउँने योजनामा छ भने पीडितहरु उचित व्यवस्थापन नभइज्याल कुनै हालतमा नहट्ने अडानमा छन् । आगलागी पीडिहरुको शनिवार बसेको एक भेलाले “मर्ने तर नहट्न” अडान राखेको स्थानीय अगुवा युवा गोपाल सिवाकोटीले बताए ।
साँसद र दल पनि पीडितको पक्षमा किन देखिएनन् ?
पुस १२ गते आगलागी भई बेघरबार बनेका भानुटोलका सुकुम्बासीहरुलाई नगरपालिकाले डोजर लगाउने धम्की दिइरहेको छ । राजनैतिक दल, साँसदहरुसमेतसँग सल्लाह परामर्श गरेर उनीहरुको उठिबास गर्ने सहमति भएको विज्ञप्ती नै नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रकाशन गरेका छन् ।
नगरपालिका स्थापना हुनु पूर्व देखि बसोवास गरिरहेका उनीहरुलाई नगरपालिकाको तर्फबाट प्रकाशित गरिएको सूचनामा नगरपालिकासँग अनुमति नदिई बसोवास गरेको भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सुरुमा घोसखानका लागि भनेर छुट्याइएको सो जग्गामा हाल नगरपालिकाले बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गर्ने भन्दै अग्नि पीडितको उठिबास गराउने योजना बनाएको छ । यो योजनामा साँसद र राजनीतिक दलका मान्छेहरुको पनि सहमति भएको सूचनामा उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले प्रकाशन गरेको सूचनामा उल्लेख भएको माननीय र दलहरुको सहमति भन्ने शब्दको खण्डन नहुनुले उनीहरुपनि नगरपालिकासँग मिलेको पीडितहरुले गुनासो गरेको छन् ।
हल्दिवारीका जनप्रतिनिधिनै गिट्टी-बालुवा बेच्ने तयारीमा !
admin- May 6, 2019
झापा । गाउँपालिकाको सडक निर्माणका लागि खोलाबाट उत्खनन गरिएको ठूलो परिणामको नदीजन्य सामग्री जनप्रतिनिधिको मिलेमत्तोमा बिक्रीका लागि अन्यत्रै थुपारेको फेला परेको छ । हल्दिवारी गाउँपालिका– १ ... Read More
भारतीय ओरियन्ट्स कम्पनीको औषधि नेपालमा कारोबार गर्ने गिरोहको पर्दाफास, झापामा १३ महिलासहित २१ जना पक्राउ
झापा । प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसायमा संलग्न गराउँदै सयौं युवालाई ठगी गरेको आरोपमा झापाको मेचीनगरबाट १३ महिलासहित २१ जना पक्राउ परेका छन् । भारतीय कम्पनी ओरियन्ट्स ग्लोबल ... Read More
admin- December 3, 2018
काठमाडौं । प्रहरीले १८ बर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई केही मनोरञ्जनस्थल प्रवेशमा कडाई गर्ने भएको छ । प्रहरीले बालबालिकासम्बन्धी ऐन ०७५ लार्य कडाईका साथ लागु गर्न थालेपछि ... Read More
NEWER POSTजेलको ड्युटीबाटै प्रहरीको पेस्तोल गायव
OLDER POSTचिया उद्योगी न्युनतम पारिश्रमीक दिन तयार, ४५ दिन देखीको आन्दोलन फिर्ता
झलनाथले भने- टुप्पीमा बसेका नेताको ‘उद्गार’ सुुनियो, आन्दोलनमा चुनौती
हराएका मोबाइल फोनले प्रहरी हैरान